3.REALR INC Technology Technology Co., Ltd. waxaa la aasaasay 2019 ……
Ultra picosecond waa aalad been abuur ah oo khaas ah oo ka mid ah aaladaha leysarka ee gudaha, kaas oo isku daraya ka qaadista cirifka, dib u soo noolaynta maqaarka iyo dhaqidda wejiga. Super picosecond waxaa soo saaray Sinoron iyo h ...
2.REALR INC Technology Technology Co., Ltd. waxaa la aasaasay 2019 ……
In kasta oo gabowgu ku dhaco da'da, waxaa saameeya arrimo la dhasho iyo geedi socodka gabowga oo gaabis ah waxaa inta badan keena caadooyin kala duwan oo muddo dheer xun leh. Haddaba, waa maxay caadooyinka xun ee dardar gelin doona gabowga? Sideen uga hortagi karnaa gabowga? Bal aan si dhow u eegno. ...
1.REALR INC Technology Technology Co., Ltd. waxaa la aasaasay 2019 ……
REALR INC Technology Technology Co., Ltd. waxaa la aasaasay 2019 ， Hayso hay'ado caafimaad oo xirfad leh iyo shirkado rasmi ah, Waxaa jira hay'ado iskaashi badan oo ku yaal Shiinaha iyo Mareykanka, Shirkaddayadu waxay iibsanaysay qalab caafimaad oo cusub ama gacan labaad ah ...